२०७६ माघ १४ मंगलवार
पर्वत, भदौ २२ गते । कहिले गाउँका बेरोजगार युवालाई स्वयंसेवकको रूपमा नियुक्ति गरेर, कहिले बाँदर नियन्त्रण अभियान गरेर त कहिले सत्केरीलाई भाले र घ्यू दिने अध्यक्ष उपहार कार्यक्रम गरेर चर्चामा आएको यहाँको एक गाउँपालिकाले फेरि जिल्लामै नमूनायोग्य काम शुरु गरेको छ ।
वडा नं ५ लुङ्खुदेउरालीदेखि वडा नं ४ पाखापानीस्थित गानावाङसम्मको सडक कालोपत्र गर्न थालेको हो । पाँच किलोमिटर सडक आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न थालेको हो । अहिलेसम्म पूरै कच्ची सडक मात्र रहेको उक्त गाउँपालिकामा पहिलोपटक गाउँपालिकाले सङ्घ र प्रदेशको मुख नताकी आफैँ बजेट विनियोजन गरेर सडक कालोपत्र गर्न थालेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवनविक्रम उच्चैले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार शनिबारदेखि उक्त सडक कालोपत्रको काम शुरु गरिएको हो ।
रु छ करोड ४६ लाखको लागतमा निर्माण हुनलागेको उक्त योजनाको १८ महीनाको सम्झौता अवधि रहेको छ । सडक निर्माणको जिम्मा फेवा कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । विसं २०७७ मङ्सिरसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सडक कालोपत्रको कामको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले शिलान्यास गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले अबको पाँच वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशका अधिकांश मुख्य–मुख्य ग्रामीण सडक कालोपत्र भइसक्ने बताउनुभयो । उहाँले अबको समय विकास निर्माण र समृद्धिको भएकाले प्रदेश सकारले दीर्घकालीन महत्वका योजनालाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले तोकिएकै गुणस्तर र मापदण्डमा रहेर काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै यसमा जनप्रतिनिधिले निरन्तर निगरानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
आर्थिक विकासको पहिलो पूर्वाधार सडकनै भएकाले गुणस्तरीय सडक बनेपछि अन्य क्षेत्रको निर्माणमा पनि सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले काम गर्न सके कुनैपनि स्थानीय तहलाई बजेटको अभाव नहुने पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले टुक्रे योजनालाई न्यूनीकरण गर्दै दीर्घकालीन महत्वका योजनामा बजेट केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त सडक निर्माणपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तै ठूला योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभयो । टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेर काम धेरै देखाउनुभन्दा पनि थोरै तर दीर्घकालीन योजनामा बजेट विनियोजन गर्न गाउँसभाले नै निर्णय गरेको थियो ।
दुई ट्रक एकआपसमा ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु !
तीन महिने बालकको गुप्ताङ्ग कुकुरले खाइदियो ! उपचारमा पैसा अभाव
राष्ट्रियसभा बैठकः तीन विधेयक पेश
हरिणको बच्चाको उद्धार